iOS 11 inowedzera mimhanzi kutonga kubva kuAirPods | IPhone nhau
Chimwe chezvinhu zvakachinja zvakanyanya chakatangwa neApple mumakore achangopfuura anga ari maAirPods, XNUMX% mahedhifoni asina tambo, uko Siri inotora chinzvimbo chakakosha, uye inozadza varidzi vayo vatsva "kudada nekugutsikana."
Zvisinei, AirPods zvakare yauya pasi pemoto, uye ini handisi kureva mibvunzo yemutengo kana dhizaini asi kuti kubvira pakuonekwa kwayo, kufamba kana kumonyorora pakati pemakwara zvinongogoneka kuburikidza nemirairo yezwi naSiri kana kuburikidza nechishandiso panoridzwa mimhanzi Neraki, iOS 11 ichatibvumidza kudzora yekumberi kana yekumashure kufamba pakati penzira kubva kuAirPods pachavo.
1 AirPods ichave iri nani neIOS 11
2 Dzokera nekudzoka pakati penziyo nepombi mbiri paAirPod dzako
AirPods ichave iri nani neIOS 11
Ndanga ndichifunga nezvekuwana AirPods kwechinguva, zvisinei, pane chimwe chinhu chinondinonotsa zvakanyanya, uye hausi iwo mutengo: Ini handidi Siri. Ndiri kureva, hazvisi zvekuti handidi Siri, haasi iye, ndini. Chandisingade kutaura kumuchina, kunyangwe zvingaite sezvakakosha, kunyangwe zvingave zvinobatsira uye nekukurumidza sei, handifungidzire ndichifamba ndichidzika nemugwagwa ndichiraira maSiri. Y mune iyo AirPods, kushandiswa kweSiri kwakakosha.
AirPods chishamiso maererano nedhijitari uye mashandiro, pamwe chete chigadzirwa chechokwadi chaicho chakatishamisa naApple kubvira pakatanga iyo iPad Pave nemakore anopfuura manomwe, zvakadaro, ingangoita kubva panguva yekuonekwa kwayo, AirPods yakagamuchirawo kushoropodzwa.
Vazhinji vakatsoropodza magadzirirwo ayo, uye vamwe vazhinji vakatsoropodza mutengo wayo, asi zvinonyanya kukosha kwandiri ndidzo ongororo dzinofunga nenzira kwayo iyo AirPod inoshaya chimwe chinhu chakareruka sekudzora kusvetuka pakati pemakwara kana vhoriyamu kuburikidza nekubatana, uye kwete hazvo kuenda kuburikidza neSiri.
Chaizvoizvo svondo rapfuura ndanga ndichitaura nezvazvo neshamwari dzangu Ayoze neOrlando, nekuti ivo vese vakaona yavo AirPods kuratidzwa masvondo mashoma apfuura, uye vese vakandiudza kuti hongu, iro basa rakarasika zvechokwadi, asi iro zvakare zvakare nyore kuenda nekudzoka pakati penziyo kana vhoriyamu kumusoro uye pasi kubva kune iyo iPhone, iyo Apple Tarisa… Ini handina mubvunzo zvakadaro, ini handidi kuti ndiburitse iyo iPhone kusvetuka rwiyo, Ndiri kuda kuridza maAirPod uye ndive nerwiyo rukwira kune inotevera.
Zvakanaka, zvinoita sekunge izvo zvishuwo zvevakawanda vedu zvave padhuze padhuze nepakutanga sezvo beta yeIOS 11 ichawedzera kumwe kutonga kuAirPods.
Dzokera nekudzoka pakati penziyo nepombi mbiri paAirPod dzako
Munguva yezuro WWDC yakakosha, Apple yakatiudza vazhinji Nhau nezve iOS 11, asi izvo zvaasina kuzivisa, kana zvirinani kuti handina kuzviziva, ndizvozvo Ne iOS 11, vashandisi vanogona kumisikidza iyo mbiri yekupomba chiito paAirPod nemaitiro matsva ekutonga izvo zvichatipa kudzora kwakawanda pane zvatiri kuteerera.
Kusvika parizvino, zvaingoitika kusarudza kuti iyo pombi yakapetwa yakaitwa Siri kana yakaita Play / Kumbomira pane odhiyo zvakadaro, izvozvi isu tinogona zvakare kuenda nekudzoka pakati penziyo, uye kutobvisa kuita uku kana zviri izvo zvatinoda. Kuchinja iyo yakapetwa pombi basa paAirPods kuri nyore sekuenda kunzvimbo dzeBluetooth dzeAirPods.
Nekudaro, Apple yakaenderera mberi nekuvandudza maAirPod nekutora mashandiro aya nhanho imwe kumberi nekubvumira zviito zveumwe neumwe wekubaya kaviri panzeve imwe neimwe kubvira isu tinokwanisa kumisikidza zviito zviviri zvakasiyana, imwe kune imwe neimwe headset.
Mune yangu nyaya yangu, ikozvino zvandinoziva kuti ini ndichakwanisa kuenda kumberi uye kumashure ndisina kukumbira Siri, ndiri nhanho imwe padhuze nekuwana AirPods. Iwe unofanirwa kugona kudzora vhoriyamu, izvo zvingave zviri nyore sekutsvedza chigunwe chako kumusoro kana pasi pane imwe yemahedhifoni, asi ikozvino ndine chivimbo kuti izvi zvichauya futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 inowedzera mimhanzi kutonga kubva kuAirPods
Nechiyero ichi ndiri nhanho imwe padhuze nekuwana mamwe.
GUILLERMO TORRES AGUILAR akadaro
Ini ndinongowana kumisa kumbomira uye siri isingasviki kurudyi zvakasiyana ios 11.0
Pindura kuna GUILLERMO TORRES AGUILAR
Mhoro Guillermo. Inofanira kubuda, icho chinhu chinouya chakajairwa, zvakaringana kuti iwe une maAirPod akabatanidzwa uye akabatana, iwe tinya "i" mukati medenderedzwa rinoonekwa padyo neAirPods dzako pa iPhone uye ndizvozvo. MuIOS 11.0.1 zvakare inoonekwa. Edza kutangazve yako iPhone, kana "Skip ichi chishandiso" wozvibatanidza zvakare.
Handifunge kuti zvinokwanisika kutsvedza chigunwe chako kukwidza kana kudzikisa vhoriyamu, nekuti zvazvinoona ndizvo "hit"
Pindura kuna freddy